DEG-DEG: Cabdiweli Gaas Oo Ku Guuleystay Madaxweynaha Puntland 5-ta Sano Ee Soo Socota – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
DEG-DEG: Cabdiweli Gaas Oo Ku Guuleystay Madaxweynaha Puntland 5-ta Sano Ee Soo Socota
A warsame 8 January 2014 4 April 2019
Garowe, Mareeg.com: Waxaa goor dhow soo gebageboobay doorashada madaxweynaha maamulka Puntland oo wareegii 3-aad ku tartamay madaxweynihii hore ee maamulka Puntland C/raxmaan Faroole iyo Raysul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdi Weli Maxamed Cali Gaas.
Guusha ayaa raacday C/weli Madaxmed Cali Gaas oo ku guuleystay inuu 5-ta sano ee soo socota hogaamiyo maamulka Puntland iyadoo C/raxmaan Faroole oo 5 sano xoo xukumayey maamulkaas laga guuleystay.
Gudoomiayha Golaha Wakiilada maamulka Puntland Saciid Xasan Shire ayaa ku dhawaaqay natiijada, wuxuuna sheegay in C/weli Maxamed Cali Gaas helay 33 cod, halka C/raxmaan Faroole haley 32 cod, waxaana xumaad 1 cod.
Markii natiijadu soo baxay waxaa hadal la siiyey madaxweynaha la doortay C/weli Maxamed Cali Gaas, wuxuuna u mahad celiyey xildhibaanada, wuxuuna sheegay in 5-ta sano ee soo socota oo cadaalad ku hogaamin doono Puntland.
Sidoo kale, waxaa la hadal la siiyey madaxweynaha xilka ka degay C/raxmaan Faroole, kaasoo soo dhaweeyey naatiijada, sheegayna iney been noqotay waxyaabihii la sheegayey ee ahaa in doorashada lagu shuban doono.
Sidoo kale, waxaa hadlay madaxweynihii hore ee Puntland C/raxmaan Faroole, kaasoo sheegay in tartanka maaanta la mid ahaa tartankii horay u dhex maray isaga C/raxmaan Faroole.
Cadde Muuse ayaa sheegay iney meesha ka baxday cabsidii laga qabay in Puntland dhibaato ka dhacdo, wuxuuna sheegay in dadka Puntland ay maareeyeen xaaladihii siyaasadeed ee jiray.
Sidoo kale, waxaa hadlay Ergayga Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nickols Kay, wuxuuna soo dhaweeyey madaxweynaha cusub ee la doortay C/weli Maxamed Cali Gaas.
Wuxuu Kay u hambalyeey Isimada, xildhibaanada Puntland iyo guddiga doorashada madaxtinimada maamulka Puntland.
DEG-DEG: Faroole Iyo Gaas Oo Isugu Soo Haray Wareega 3-aad